Kulliyada Shareecada Ee Jaamacada Gollis Oo Abaal Marino Gudoonsiisay Arday Kaalmaha Hore Ka Galay Wax Akhriska Luuqada Carabiga+Sawiro
(Hadhwanaagnews) Friday, January 12, 2018 16:44:02
Hargeysa(HWN):-Kuliyada shareecada ee jaamacada Gollis ee magaalada Hargeysa ayaa abaal marino gudoonsiisay arday kaalmaha hore ka gashay tartan dhinaca wax akhriska ah.
Tartankan oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen guddida ardayda ee kuliyada shareecada iyo maamulka Kuliyada ayaa waxa ka qayb galay ardada wax ka barata kuliyada shareecada ee jamaacada Gollis, kuwaas oo si mug weyn leh u soo bandhigay awoodooda wax akhris ee luuqada carabiga.
Munaasibada ardaydan lagu gudoonsiinayey abaal marinta oo ka qabsoontay xarunta hay’adda shaqaalaha dawlada ayaa waxa
ka soo qayb galay maamulka kuliyada shareecada ee jaamacada Gollis, macalimiinta, ardayda iyo marti sharaf kale.
Gudoomiyaha ardayda kuliyada shareecada ee jaamacada Gollis Nuur Cabdilaahi Xasan oo ka hadlay munaasibadan ayaa ka waramay mudadii ay soo qaban qabinayeen tartanka ardayda dhex maray, waxaanu sheegay in tartankan loogu tala galay inuu wax badan ka badalo awooda wax akhris ee ardayda.
Hormoodka kuliyada shareecada ee jaamacada Gollis Dr.Cabdirisaaq Axmed oo isaguna ka hadlay munaasibadan ayaa ka waramay muhiimada ay leedahay in ardayda loo qabto tartano noocan ah oo kor loogu qaadayo awooda wax akhris ee ay u leeyihiin luuqada carabiga, waxaanu xusay inay sii wadi doonaan barnaamijyada noocan ah ee ardayda looga faa,iidaynayo.
Sidoo kale waxa munaasibadan ka hadlay Muuse Maxamed Cabdiraxmaan, Yaasiin Ibraahin Cabdi iyo Sheekh Cabdicasiis Maxamed Sabxaan kuwaas oo dhamaantood ka waramay muhiimada uu leeyahay wax akhrisku, waxaanay ardayda kuliyada shareecada ee jaamacada Gollis kula dardaarmeen inay ku dedaalaan wax akhriska isla markaana ay wakhti badan galiyaan.